Ngelixa inkcazo ye "mandulo" ingqinelana nokuchazwa, isebenzisa imigaqo ekhethekileyo xa ixoxa ngembali yakudala, ixesha elide lihlukileyo:
I-prehistory : Ixesha lobomi bomntu elaza ngaphambili ( oko kukuthi , i-prehistory [igama eliqulunqwe, ngesiNgesi, nguDaniel Wilson (1816-92), ngoBarry Cunliffe
Ixesha elidlulileyo le-Antiquity / Medieval: Ixesha eliye lafika ekupheleni kwexesha lethu kwaye lahlala kwi-Middle Ages
Intsingiselo ye "Imbali"
Igama elithi "imbali" linokubonakala libala, libhekiselele kunoma yintoni edlulileyo, kodwa kukho imiba ethile yokugcina engqondweni.
Imbali-phambili: Njengamagama amaninzi angaphambili, imbali-ngaphambili ibonisa izinto ezahlukeneyo kubantu abahlukeneyo. Kweminye, ithetha ixesha ngaphambi kwempucuko . Kulungile, kodwa ayifumaneli umahluko obalulekileyo phakathi kokuqala kwimbali kunye nembali yasendulo.
Ukubhala: Ukuze impucuko ibe neembali, kufuneka ukuba yashiye iirekhodi ezibhaliweyo, ngokubhekiselele kwinkcazo yangempela yegama elithi 'imbali.' "Imbali" ivela kwiGrike ukuze 'iphandle' ize ibe yintetho ebhaliweyo yeziganeko.
Nangona uHerodotus , uYise weMbali, ebhala ngeentlanga ngaphandle kweyakhe, ngokubanzi, uluntu lunembali xa linikeza irekhodi yalo ebhaliweyo. Oku kufuna ukuba inkcubeko ibe nenkqubo yokubhala kunye nabantu bafundiswe ngolwimi olubhaliweyo. Ekuqaleni kwamasiko amandulo, abantu abambalwa babekwazi ukubhala.
Kwakungekho umbuzo wokufunda ukuphatha ipenki ukwenza ama-squiggles angama-26 ngokuhambelana-ubuncinci kude kube nokuveliswa kwealfabhethi. Ngamhla, ezinye iilwimi zisebenzisa izikripthi ezithatha iminyaka ukufunda ukubhala kakuhle. Iimfuno zokutya kunye nokukhusela uluntu zifuna ukuqeqeshwa kwiindawo ezingekho kwireferensi.
Nangona kwakukho amasosha aseGrike namaRoma awakwazi ukubhala nokulwa, ngaphambili, abo badala ababengabhala baxhomekeke kwiklasi yobufundisi. Kulandela ukuba ukubhala kwangaphambili kunxulumene noko kwakunqulo okanye elingcwele.
Abantu banokunikela ubomi babo bonke ukuba bakhonze oothixo babo okanye oothixo babo (b) kwifomu yabantu. UFaro waseYiputa wayengukuzalwa kwakhona koothixo uHorus, kunye negama esilisebenzisa ekubhaliseni imifanekiso yabo, i-hieroglyphs, ithetha ukubhalwa okuyingcwele ( kubhalwe 'ukudweba'). AmaKumkani nawo aqeshe ababhali ukuba babhale izenzo zabo, ngokukodwa abo baqhayisa uzuko lwabo njengemikhosi yempi. Ukubhala okunjalo kubonakala kwiimboniso, njengombumba obhalwe nge-cuneiform.
I-Archaeology & Prehistory
Abo bantu (kunye nezityalo kunye nezilwanyana) abahlala ngaphambi kokuveliswa kokubhaliweyo, ngolu ngcaciso, i-prehistoric.
I-prehistory ibuyele ekuqalekeni kobomi okanye ixesha okanye umhlaba.
Indawo yangaphambi kwimbali yimihlaba yezifundo zemfundo kunye nefomu lesiGrike elithi 'ekuqaleni' okanye i- pale- 'ubudala' eqhotyoshelweyo. Ngaloo ndlela, kukho iinkalo ezifana ne-archeology, paleobotany, kunye ne-paleontology (ejongene nexesha phambi kwabantu) elijongene nehlabathi phambi kokuphuhliswa kokubhala.
Njengoko isichazi-magama, i-prehistoric ithetha ukuba ngaphambi kwempucuko yasemadolobheni, okanye ngokukhawuleza, ingahlaziywanga.
Kwakhona, i-prehistoric civilizations ihlala yilabo abangenazo iirekhodi ezibhaliweyo .
I-Archaeology & History History
I-Classicist uPaul MacKendrick yashicilela i -Mute Stones Ukuthetha ( imbali ye-peninsula yase-Italy ) ngo-1960. Kule ndlela kunye nokulandelelana kwayo kwiminyaka emibini kamva, i -Greek Greek Stones Ithetha ( uphando lwezinto zakudala zeTroy olwenziwa ngu- Heinrich Schliemann , linika isiseko sembali yakhe yehlabathi lamaGrike ), wasebenzisa iziphumo ezingabhaliweyo zezinto zakudala zokunceda ukubhala imbali.
Abavubukuli bemiphakathi yokuqala bahlala bexhomekeke kwizinto ezifanayo njengabalwazi-mbali:
Bobabini baqaphele izinto ezinokuthi ziphile kwizinto, ezinjengezinto ezenziwe kwintsimbi okanye ebumbini (kodwa ngokungafani nempahla yokugqoka kunye nemveliso yezinto ezikhulayo kwiindawo ezininzi).
Amasayithi angcwatywayo angaphantsi komhlaba angaba nokukhusela izinto eziza kusetyenziswa ebomini.
Izindlu kunye nezo zakhiwo ezithathwa njengomcimbi zizalisa izithuba ezininzi.
Zonke ezi zinokubambisana nolwazi olubhaliweyo, ukuba lukhona ngexesha.
Iimihla ezahlukileyo, ixesha elihlukileyo
Umgca wokuhlukanisa phakathi kwephambili kwimbali kunye nembali yasendulo nayo iyahluka kwihlabathi lonke. Ixesha elidala lembali laseYiputa ne- Sumer laqala malunga ne-3100 BCE; mhlawumbi ikhulwini leminyaka kamva ukubhala kwaqala kwi- Indus Valley . Ngomso kamva (malunga no-1650 BCE) yayiyiMinoans ene-Linear A ayilungiswanga. Ngaphambili, ngo-2200, kwakukho ulwimi lwe-hieroglyphic eKrete. Ukubhala komgca eMesoamerica kwaqala ngo-2600 BC
Ukuze singabi nako ukuguqulela nokusebenzisa ukubhala yinkinga yabalwazi-mbali, kwaye kuya kuba yimbi ngakumbi xa bengavumi ukuzithobela ubungqina obungabhalwanga. Nangona kunjalo, ngokusebenzisa izinto zokufunda ngaphambi kokubhala, kunye neminikelo evela kwezinye iinqununu, ingakumbi i-archeology, umda phakathi kwembambano kunye nembali ngoku iyenziwayo.
Yasendulo, Yamanje, kunye neMinyaka Ephakathi
Ngokuqhelekileyo, imbali yasendulo ibhekisela ekufundeni ubomi kunye neziganeko kwixesha elidlulileyo. Ikude kangakanani ekumiselwe kwindibano.
Ihlabathi laMandulo liguqukela kwi-Middle Ages
Enye indlela yokuchaza imbali yasendulo kukuba uchaze into eyahlukileyo (imbali). Ukuchasene ngokucacileyo "kwexesha elidala" "lwanamhlanje", kodwa mandulo aluzange lube lwanamhlanje ngobusuku. Akuzange kuguquke kwi-Middle Ages ubusuku.
Ihlabathi la mandulo lenza utshintsho kwixesha elidlulileyo
Enye yeelayibhile yenguqu yexesha elidlulayo kwihlabathi lakwadala lakudala "Late Antiquity."
Eli xesha lihlanganisa ixesha ukusuka kwi-3 okanye yesine ukuya kweyesi-6 okanye ye-7 leminyaka (ngaphambili, malunga nexesha elibizwa ngokuthi "iMinyaka emnyama").
Eli lixesha laliye apho ubukhosi baseRoma baba ngumKristu, kwaye
UConstantinople (kamva, i-Istanbul), kunokuba e-Italy, weza kulawula ubukumkani.
Ekupheleni kweli xesha, uM Mohammad kunye no-Islam baqala ukuchaza amandla, okwenzayo
IsiSilamsi i- terminus ante quem eqinile ( ixesha lokufunda, lithetha 'inqaku ngaphambi kokuba' ) ixesha lembali yamandulo iphelile.
I Middle Ages
Ixesha elide laseYurophu lithatha ixesha elibizwa ngokuba yi- Middle Ages okanye iMedieval (ukusuka kwisiLatini (um) 'phakathi' + kweev (um) 'yobudala'.
I-Middle Ages yayinguxesha lokutshintsha okukhulu, ukuzisa iYurophu ukusuka kwi-Classical age ukuya kwi-Renaissance.
Njengenguqu yenguqu, akukho nanye, ikhefu elicacileyo kunye nehlabathi la mandulo.
UbuKrestu bubalulekile kuma-Middle Ages kunye nokunqula iintlanga kubalulekile kwixesha elidlulileyo, kodwa utshintsho lwaluguquguquke ngaphezu kokuguquka.
Kwakukho iziganeko ezahlukahlukeneyo endleleni eya kuBukumkani bamaRoma baseRoma phakathi kwexesha elidlulileyo, kwizenzo zokunyamezela okuvumela amaKristu ukuba akhonze ngaphakathi koBukumkani ukuya ekuphelisweni kwemimoya yobukhosi neyebuhedeni, kuquka neeOlimpiki .
UMlawuli waseTheodosius owaphelisa iiOlimpiki
Ngokwezibhali ezixhomekeke kubantu base-Anti-late, ama-6 ekhulu leminyaka uBoethius no- Justinian babini "bokugqibela kumaRoma ...".
U-Boethius (umz. 475-524) ubizwa ngokuba yiyokugqibela yamafilosofi aseRoma, ukubhala ukulandelwa ngesiLatini, De consolatione philosophiae 'KwiNduduzo yefilosofi,' kunye nokuguqulela uAristotle kwimiqondo, ngenxa yoko uAristotle wayengomnye wamaGrike izafilosofi ezifumaneka kubaphengululi beMinyaka ephakathi.
U-Justinian (483 - 565) ubizwa ngokuba ngumlawuli waseRoma wokugqibela. Wayenguye umbusi wokugqibela ukwandisa ubukhosi kwaye wabhala ikhowudi yomthetho eyayifingqa isithethe somthetho saseRoma.
Ukuphela koBukumkani baseRoma ngo-AD 476
Omnye umhla wokuphela kwexesha lembali yamandulo - eninzi elandelayo - inkulungwane yokuqala ngaphambili. Umlando u-Edward Gibbon wasungula i-AD 476 njengesiphelo sobukumkani baseRoma kuba kwakukuphela kokulawula kokugqibela kwimbusi waseRoma . Kwakuku-476 ukuba umntu obizwa ngokuba ngumnqabini, uMdatshi waseJalimane wayithatha iRoma, wamisa uRomulus Augustulus .
Ingxowa yeRoma ngo-410
IWaveine Wars kunye ne-Gallic Sack yaseRoma ngo-390 BC
UMlawuli woMRoma wokugqibela
URomulus Augustulus ubizwa ngokuthi " umbusi wokugqibela waseRoma eWest " kuba ubukumkani baseRoma babuye bahlukana baba ngamacandelo ekupheleni kwekhulu lesi-3, phantsi koMlawuli uDiocletian . Ngenkunzi enye yobukhosi baseRoma eByzantium / Constantinople, kunye neye-Italy, ukususwa kwesinye seenkokheli akufani nokutshabalalisa ubukhosi. Ekubeni umbusi osempuma, eKonstantinople, waqhubeka enye enye yeminyaka, abaninzi bathi ubukumkani baseRoma buwa kuphela xa uConstantinople awela eTurkey ngo-1453.
Ukuthatha umhla ka-Gibbon we-AD 476 njengokuphela koBukumkani baseRoma , nangona kunjalo, inqaku elinjengenjongo yokungafuni. Amandla entshonalanga ashintshile phambi ko-Odoacer, abangewona ama-Italiya behlala etroneni ngeenkulungwane, ubukumkani bebuye behla, kwaye isenzo sokufuzisela sihlawulwe kwi-akhawunti.
I-Middle Ages iyigama elisetyenziswe kwiindlalifa zaseYurophu zoBukumkani baseRoma kwaye ngokuqhelekileyo zihlanganiswe ngegama elithi " feudal ." Ayikho imvelaphi yehlabathi kunye neemeko kwezinye ihlabathi ngeli xesha, ukuphela kweClassical Antiquity, kodwa "ngexesha elide" ngezinye iinkqubo kusetyenziswa kwezinye iindawo zehlabathi ukubhekisela kumaxesha ngaphambi kokuba ixesha lokunqoba okanye maxesha .
Ukufumana iinkcukacha ezininzi, nceda ubone ubukumkani baseYurophu Ukususela kuMlotha woBukumkani baseRoma.
Imbali yamandulo / yeNkalo yeGrafi
Imigaqo eyahlukileyo kwiMbali yamandulo kunye nexesha eliphakathi
Yembali Yembali Eliphakathi
Abaninzi oothixo UbuKristu nobuSulumane
Vandals, Huns, Goths UGenghis Khan kunye namaMongol, iiVikings
Abalawuli / ubukumkani Ookumkani / amazwe
Abemi, abantu bezinye iintlanga, amakhoboka Abahlali (abafana), abahloniphekileyo
Abafayo IHashshashin (Abahlaseli)
IiMpi zamaRoma Kwiintlabathi
I-Warring States Ixesha lexesha laseTshayina lasendulo
Amazwe abalulekileyo kwimbali yamandulo
Indlela yokuhlola iBelt yakho yexesha
Amazwi Akunene Okuthetha I-Goodbye
I-US yokutya kokutya
Ngumthendeleko ka-Saint Anthony?
Imvelaphi kunye Nentsingiselo ye-Adinkra Symbols
Umthandazo weMthendeleko yeKrismesi
20 Iingoma eziphezulu zeBiggie Smalls
Iindlela ezi-5 zokuphatha iLungu leNtsapho yamaLungu
Funda nge-Gym Gland
North Korea | Iinkcukacha kunye neMbali